दशैंको मुखमा पूर्वराजकुमारी प्रेरणा लाई घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलको कडा आदेश ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दशैंको मुखमा पूर्वराजकुमारी प्रेरणा लाई घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलको कडा आदेश !
काठमाडौ । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पूर्व राजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई आफू बस्दै आएको घरबाट बलपूर्वक निकाल्न मातहतका कर्मचारीलाई आदेश दिएका छन् । नेपाल ट्रस्ट सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रेरणालाई घरबाट एक्काइस दिनभित्र निस्कन आदेश दिइएको पत्र असोज ५ गते बुझाइएको छ र, यो अवधिभित्र घर नछोडे बलपूर्वक घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका छन् ।
‘लक्डडाउन’को यो अवस्थामा घरभाडामा बस्नेहरूलाई यथावत रहन दिनुपर्ने र ब ल ज फ्ती कसैले घरबाट निकाल्न खोजे त्यस्तो घरधनीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको छ । यस अवधिमा भाडा नबुझाएको भन्दै घरबाट निकाल्ने कैयन घरधनीहरूलाई सरकारले कारबाही पनि गरिरहेको छ । तर ईश्वर पोखरेलले भने दुई दशकदेखि बसोबास गर्दै आएको घरबाट राजकुमारीलाई निकाल्न कडा आदेश दिनु आश्चर्यको विषय भएको छ ।
नेपाल ट्रस्टको एक सूत्रले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेरणालाई बढीमा एक वर्षसम्म विजयाबासमै रहन सक्ने व्यवस्था गरिदिन परामर्श गरेका थिए । तर, ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहलाई पनि ठाडै इन्कार गरे र, एक्काइस दिनभित्र घर छोड्न पत्र पठाउँदै नछोडे बलपूर्वक निकाल्न आदेश दिए । नेपालीहरूको महान पर्व दशैँको मुखमा राजकुमारीलाई घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलले केसम्म गर्नुहुने हो जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
नेपालको झण्डा जलाउनेविरुद्ध सयौ उजुरी हेर्नुहोस कस्ले -कस्ले गरे
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड बाट आयो दुखद खबर